Tolọ ọrụ na-ehichapụ ezé eletriki - China Electric Toothbrush Manufacturers, Suppliers
Ọgụgụ isi Sonic Electroni ...
Baby na ụmụaka mara mma Ultr ...
Egwuregwu Electronic Hand Free Ultras ...
Ultrasonic Intelligent Nchekwa onwe ...
Smart 5 ụdịdị Okenye Sonic Electric Toothbrush EA310
Akwukwo akuko nke nka na uzu: Sonic toothbrush gburugburu na 31000 strok-Kporie ezé dị mma ma dị mma, debe ọchị gị nwere obi ike. Nweta nhicha zuru oke na mkpọtụ belatara, ma mekwa ka ahụike gị dịkwuo mma naanị ụbọchị 14.
2020 Ọhụrụ Adịla Sonic Electric Toothbrush EA312
Ihe ABS, Isi Iyi Ike PC DC 5V, USB Nchaji Typedị Batrị DC 3.7V, 800mAh Lithium Battery Watterproof IPX7 Product Size Φ28 * 255mm Net Weight 90g
Ngwunye Sonic Electronic Dochie Multifunctional Mini Electric Toothbrush Timer na Ncheta EA132
Ngosipụta Ngwaahịa: Nkọwapụta: Ihe ABS Ike Isi Iyi 2W, USB Nchaji Typedị Batrị DC 3.7V, 500mAh Lithium Batrị Watterproof IPX7 Ngwa Ngwa Ngwa 20 * 20 * 215mm Net Weight 56g Njirimara: 1.Magnetic Levitation Motor. 2.High Ogo Dupont Naịlọn 612 bristle. 2dị ọrụ 3.2 (Dị ọcha, White) 4.2 oge ngụ oge na 30 sekọnd oge nchetara 5. Vibration 22000 strok / min 6.30 ụbọchị oge batrị mgbe awa isii na-akwụ ụgwọ. 7.Unique akara usoro imewe site onwe anyị, dakọtara na mo ...
Batrị nwere ike ịnweta Powered Electronic Sonic Toothbrush EA315
A na-eji buples eme ihe na nylon DUPONT, "W" na-eme ka o kwekọọ na ezé topography maka nhicha nke chịngọm ma sie ike iru mpaghara. Rịba ama: Isi ahịhịa ga-echetara gị ka ị dochie isi isi gị site na akara ngosi na-acha anụnụ anụnụ. Mmetụta dị na chịngọm na akara ngosi na-acha anụnụ anụnụ na-agba agba na ime ka ị mara mgbe oge iji dochie isi ahịhịa.
Egwuregwu Electronic Hand Free Ultimate Adult Automatic Toothbrush and Brush Heads EB510
Acoustic vibration dị ọcha teknụzụ: Sonic asacha ezé gburugburu na 31000-37500 ọrịa strok / nkeji ga-enyere wepu ruo 150% ọzọ ihe e dere ede karịa akwụkwọ ntuziaka nkịtị ezé, ma, sonic asacha ezé nwere ike inyere iji gbochie chịngọm nlaazu.
Andmụaka na Childrenmụaka mara mma Ultrasonic Electric Child Nha nha ahịhịa Kidsmụaka Na Soft Bristle ED710
Ngosipụta Ngwaahịa: Nkọwapụta: Ihe ABS Ike Isi Iyi 2W, Ikuku Inductive Nchaji Battery Type DC 3.7V, 500mAh Lithium Battery Watterproof IPX7 Product Size 25 * 20 * 180mm Net Weight 69g Feature: 1.Magnetic Levitation Motor. 2.High Ogo Dupont Naịlọn 612 bristle. 2dị ọrụ 3.2 (Ọcha, White) 4.2 oge ngụ oge na 30 sekọnd oge nchetara 5. Vibration 18000 strokes / min 6.30 ụbọchị oge batrị mgbe awa isii na-akwụ ụgwọ. 7.Soft silicone ahịhịa isi na goo ...